UMarina Alexandrova: ubomi bomntu - indoda, abantwana, intsapho, isithombe. UMarina Alexandrova noAndrei Boltenko, umtshato
Ingaba kukho ubuhle obuhle kunye nomntu onommangaliso, ukumomotheka okumnandi, ukujonga ubuso obucacileyo kunye nobomi obunzima obungenakuthobeka? Ngokombono wethu, impendulo iyabonakala - akunjalo. Xa ibhinqa elisehlweni ekudanisa iidemon ezinjalo, lindela ingxaki - ukuthanda kukaShakespeare. Cinga, mhlawumbi, kwaye singamadoda omdlali omhle uMarina Alexandrova kunye nobomi bomntu esiza kuxoxa ngawo. Kwaye siya kuyenza ngendlela enomusa: ngendlela yesetyhini. Akufanele uhlekise, ukuba uMarina Pupenina (lo uyineniso yangempela yomdlali we-actress) ofunde umphathi wezokhenketho okanye umtoliki, njengabazali abanengqiqo abafuna, akukho mntu wayenokucinga ngamadoda akhe, ngaphandle komlingane osemthethweni, aze abe nomona. Siyakhumbula ukuba uMarina akayithandi kakhulu xa bephazamisa ebomini bakhe. Kwaye asiyi kuphazamisa, nje ubale iintolo ze-Cupid uze uthethe encinci malunga naye, malunga neentombi.
I-Biography ka-Marina Alexandrova
Ngo-Agasti 1982, intombi kaMarina yazalwa kwintsapho yomkhosi kunye neendlela. UPupeniny (uMarina kamva wathatha intimba kagogo wakhe) wayehlala ngelo xesha kwidolophu yase-Hungarian ye-Kiskunmaysha. Kwiminyaka emihlanu kamva intsapho yabuyela eSt. Petersburg, apho uMarina wahlala khona de wayeneminyaka eli-16 ubudala.
Schoolgirl Marina Alexandrova
Intombazana ethandekayo yafundiswa esikolweni esiphakeme, yadlala ihabhu, yavuma ukuthatha imifanekiso, yavakashela i-studio yaseshashalazini, yathatha inxaxheba kwimini yokudala kwaye yaphupha ukuba yinkwenkwezi. Igama le-studio "Cinga" igalelo elikhulu kule nto. Ewe, ngoko uMarina watshintsha igama lakhe waza waya kuMosi. Esikolweni saseSchukinsky babona italente yentombazana yobugcisa baza bahamba. Umzila wezitalato, uAzazel, Fihla, Umlandele wamandulo, Umtsalane-umgcini-iminyaka eyi-15 umdlali weqonga uye wadlala indima e-50 ...
Amadoda amane aphezulu ebomini kaMarina Alexandrova
I-Cupid yindodana ka-Uranus no-Aphrodite - UThixo unomoya, kwaye umculi ngumnye wabo. Leyo ayiyo ndawo apho utolo lwethando luyithumela khona, luza kubetha ngokuthe ngqo. Ukuzonwabisa kumnandi, ukulawula intando nentliziyo, kunye namaxhoba akhe ahluphekile: abathanda abangenakufanelekanga, abaqapheli abazinikeleyo. Ngokukodwa iCapeid iyakuthanda abafazi abancinci nabaziqhenkcezayo: ngaphakathi kwabo akaphosi iintolo, kodwa izibane ezivuthayo - ezivela kubo zibuhlungu zothando. Mhlawumbi, umphathi uPugenina wayenothando olulodwa ubomi kunye nolonwabo lwentsapho oluzolileyo, kunye nomdlali we-actress uAlexander, ongenamvakalelo, okanye othungelayo ngomlilo. Kuphi ukukhangela isizathu-kwindawo enzima yowesifazane obalaseleyo, iindleko zobugcisa bakhe okanye kwiinkcazo zikaThixo onothando?
Indoda yokuqala yayinguMarna Alexandrova. Alexander Domogarov
Inkwenkwezi yenkwenkwezi yadlala uthando kwiskrini, kwaye xa "iiNkanyezi ze-Epoch" zidlulile, abazange bakwazi ukuhlula. Kwakukho ngo-2005, kwaye kwiminyaka emibini kamva uMarina no-Alexander baqhekeka. Kodwa yintoni eyayiyiminyaka emibini! Isiqingatha selizwe libukele uchungechunge oluthambileyo malunga nentombazana enomdla othanda intombazana embi. Iimbambano ezininzi, amava, ukwahlukana, ukuthengiswa kunye nokulwa - into enjalo engathandabuzekiyo yendoda nomfazi inokubhala kuphela uThixo weengxabano (ubusuku obumnyama). Baya guquka baze bahlakaze, bafungele baze baxolelane, bathande kwaye batywe, baze bazama ukufundisana kwakhona. Kwaye, ekugqibeleni, uMarina Alexandrova waphoswa apho, wangena phezulu, wamthabatha u-Alexander Domogarov. Yaye yintoni ngokubuyisela?
UMarina Alexandrova noAlesandro Domogarov
Indoda yesibini ngu-Marina Alexandrova. Ivan Stebunov
Ngomnye umnyaka emva kokuhlukana noDomogarova Marina umlingisi otshata ngokusemtshatweni u-Ivan Stebunov. U-Lovelace ongenakunqwenelekayo kunye nomnxila, ovukelayo kunye nengqondo, wamtsala uMarina ngokumomotheka kwakhe kunye nentlungu enkulu. Kodwa oko bahlukile! Hlanganisa le ntsapho, mhlawumbi yinto enye - uthando lomsebenzi osebenzayo. Emva koko u-Ivan Stebunov akade nomdla kunye nenjongo ye-Marina Alexandrova. Indoda ethandwayo yayikhanya ngovuyo kwisithombeni, ngelixa umfazi wakhe wayeka ukumemeza ngokukhawuleza. Ayikho iCapeid engenakunqwenela, eyathumela iintolo zokuqala zothando, namagqirha, awakhulunywa nguMarina, akanakwenzeka, njengoko kwenzeka, uphilise umdlali we "Turkish". Emva kweminyaka emibini uStevunov noAlexandro bahlukana. Ngenxa yokufa, ndifuna ukukholelwa, ndinika uMarina ingqondo yomfazi.
U-Marina Alexandrova no-Ivan Stebunov
Indoda yesithathu ngu-Marina Alexandrova. Andrei Boltenko
Ummeli wama-Marina uAleksandrova kunye nomvelisi weCancer One no-Andrei Boltenko baye babamba impilo yokuvalwa iminyaka yesihlanu ukususela ngomtshato. Uthando lwabo alukho kwiinguqu eziluhlaza kunye neefoto ezimnandi. Akukho ntshukumo yothando efutshane emfutshane, i-Cupid yokutsala okwesithathu, ngokwembono yethu, isitshintshe ngqo. Le yintsapho yokwenene - ngokuthandana, ukunyaniseka kunye nabantwana. Xa intombi ivuyayo, iba yedwa. Akukho mzabalazo, intlungu, ukudlala, ukukhathazeka okubuhlungu kunye ne-adventurism. Kukho ukuzithemba okungapheliyo kumntu, obizwa ngokuba ngumthandi wesifazana.
Ngubani u-Anna Mathison ngokwenene? Iinkcukacha zobomi bomntu bomfazi omtsha uBezrukov bafunde apha .
UMarta Alexandrova noAndrei Boltenko
Indoda yesine nguMarta Alexandrova. Andrei Boltenko, Jr. (umfanekiso womntwana)
Kwiinyanga ezine ngaphambi kokuzalwa, umdlali we-actress uhambela eNew York ukuchitha kunye nomyeni wakhe isiganeko esilinde ixesha elide-ukuzalwa kwabazali bokuqala. NgoJulayi 2012 lo mbhangqwana unendodana no-Andrei. Abazali abanomdla nabathandayo bakholelwa ukuba umntwana wabo uyona mangalisayo kwaye ngelinye ilanga uya kuba nako ukutshintsha ihlabathi. Kwaye ngoxa u-Andrei Boltenko, uJr. uyamkholisa abazali bakhe ngempumelelo yokuqala kwaye iguqula ukuba ibe ngcono. NgoSeptemba 2015, umdlali we-actress wazala intombi yakhe uKatyya. Ubomi bobuqu boMarina Alexandrova. Ekugqibeleni, wambona uvuyo. Kangakanani? Ngaba ayikho iCapeid enobuqili ekulungiselela utolo olutsha lokutshisa? Lindani, siya kubona.
Unyana kaMarina Alexandrova (isithombe esivela ku-Instagram)
Ukulahla kunye netyhuna
Indlela yokuphatha i-diathesis engummangaliso kumntwana?
Isaladi kunye namaqabunga
Isaladi kwi sipinashi kunye nee-radishes
Ngaba ungathanda ukujonga ngokukhawuleza kwelinye lamaqela e-kindergarten?
Silwa neenwele ezinamafutha: zokupheka kwiimaski zasekhaya eziphambili